राजनीति, मेरो बुबा र म
एउटा समय थियो, जतिखेर बुबा आफ्नो पार्टीको सांगठनिक काममा एकदमै ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो र म प्राथमिक तहमा अध्ययनरत थिएँ । घरमा बुबाको उपस्थिती अति नै पातालो हुने गर्दथ्यो । जिल्लाका विभिन्न गाउँहरुमा उहाँ पुगिरहँदा घरमा चाँहि म, भाई र आमा बुबाकै विषयमा कुरा गरेर बस्थ्यौं । आमा निकै नै चिन्ता लिनुहुन्थ्यो विशेषगरी बुबाको स्वास्थ्यप्रति । किनकी, बुबा हुनुहुन्थ्यो नै त्यस्तो । आफ्नो स्वास्थ्यको पटक्कै ख्याल नगर्ने – जस्तो खानेकुरा तात्तातै खाने, मदिरापान गर्ने आदि ईत्यादि । समाज र देश निर्माणको महानअभियानमा टेवा दिन पार्टीको काम लिएर गाउँगाउँ पुग्ने पिताजीलाई आफ्नै घर व्यवहारमा उति गम्भिर चासो रहेन । यो एउटै कारण थियो, म सानो छँदा पनि बुबासँग यहि विषयलाई लिएर झगडा गर्थे ।
सात कक्षाको विद्यार्थी हुँदा वर्षायामको एकरात एकहप्तापछि घर फिर्नुभएको पिताजीलाई मैले भनेको थिएँ – “तिमी बुढालाई हाम्रो केही मतलब छैन, खाली पार्टी पार्टी भनेर हिड्ने, अझ घर आउँदा रक्सी पिएर आउने ? तिमी जिउँदो लाश हौ !” मलाई थाहा छ खास त्यती धेरै मात्ने गरी रक्सी पिउनुभएको थिएन पिताजीले, परन्तु म हदभन्दा तल गिरेर बुबालाई गाली गरेको थिएँ । मैले देखेँ बुबाको आँखामा आँशु टिल्पिलाएको थियो । र, मलाई आमाले नराम्रोसँग झपार्नु भएको थियो । र, बुबासँगै आमाका पनि आँखा रसाएका थिए । त्यो नै पहिलो र अन्तिम पटक थियो जतिखेर मेरा कारणले मेरा पिताजीले रुनु पर्‍यो ! आमा त सानो कुरामा पनि रोईहाल्नु हुन्थ्यो, जस्तो म र भाईबीच झगडा भो भने पनि रोईहाल्ने । सामान्य कुरामा पनि रोइहाल्ने हुँदा आमाको रुवाईसँग मलाई बानी परेको थियो, तर बुबाको आँखामा आँशु देख्दा मेरो भक्कानो फुट्यो अनि मैले माफी पनि मागेँ । अहिले पनि त्यो क्षण सम्झदा ग्लानी हुन्छ मलाई ।
मैले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण नगरुन्जेलको उमेरसम्म बुबा खास धेरै बोल्नुहुन्थेन मसँग । स्वभावै त्यस्तै, कम बोल्ने । मैले गीत गुनगुनाएको वा धेरै बोलेको पटक्कै मन नपार्ने । यस्तो हुँदा बुबासँग मलाई सारै रिस उठ्ने गर्दथ्यो । तर जब किशोरावस्थाको म एउटी किशोरीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहन पुगेँ, बुबाले बल्ल मलाई साथीको रुपमा ब्यवहार गर्न थाल्नुभयो । सम्झाउनुहुन्थ्यो – “प्रेम एउटा पक्ष हो, आफ्नो अध्ययनकार्य र भविष्यको विषयमा गम्भिर हुनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसकारण तँ आफै जान्ने छस्, विचार गरेर अगाडि बढ्नु ।” उतिखेर खास गम्भिरतापूर्वक लिइएन यस कुरालाई अहिले आएर बुबाको त्यस सुझावको सघन अर्थलाई मनन गरिरहेछु । यो त्यस्तै प्रविणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्दा ताकाको कुरा हो । अनि त्यतिखेरदेखि मात्र बुबाले मसँग विशेष खालका दोहोरो संवाद शुरु गर्नु भएको थियो । मैले स्थानीय पत्रिकाहरुमा लेख्न शुरु गरेँ, ती लेखहरु छाप्नुभन्दा अगावै कहिल्यै पनि बुबालाई देखाइनँ । तर पत्रिकामा छापिएर आईसकेपछि बुबाले मलाई लेखका विषयमा पृष्ठपोषणहरु दिन थाल्नुभयो । कतिपय यस्ता अवस्थाहरु पनि आए लेखकै कारणले हामी बाबुछोराबीच मतभिन्नता रहे । विशेषगरी ती लेखहरु जुन राजनैतिक विषयमा केन्द्रित हुन्थे, र म त्यस विषयमा पर्याप्त जानकारीका बेगर पनि कलम चलाउने गर्दथे । किन्तु, राजनीतिका विषयमा बुबासँग मेरो सामान्य छलफल वा विचार विमर्श पनि भएन । मैले प्रश्नहरु राखेँ पनि बुबाले खास मतलब दिनु हुन्थेन । भन्नुहुन्थ्यो – “तेरालागि पढाई महत्वपूर्ण कुरो हो, राजनीति हैन । राजनीतिका विषयमा जानकारी हासिल गर्ने उमेर हैन यो ।” तर बुबाले यति भनिरहँदा मैले उहाँले संग्रह गरेर राखेका लुसुनका कथाहरु र विशेषगरी चिनियाँ क्रान्तीसँग सम्बन्धित कथाहरु अध्ययन गरिसकेको थिएँ ।
तथापी त्यतिन्जेलसम्म राजनीतिको हुटहुटी दिमागमा चढिसकेको थियो, मेरो । खासगरी २०५८ को हिउँदमा जब मैले एकजना पूर्व काङ्ग्रेसी कार्यकर्तासँगको भेटमा एउटा गोप्य कुरो थाहा पाएँ । लगत्तै मेरो दिमागमा राजनीतिको खास रङ चढ्न गयो । त्यो गोप्य कुरो थियो कि – ४५/४६ सालतिर जतिखेर म ३/४ वर्षको बच्चो थिएँ, त्यतिखेर स्थानीय केहि कांग्रेसी नेताहरुले मेरो बुबालाई भौतिक आक्रमण गर्ने छलफल गर्थे रे – आफ्ना बैठकहरुमा । हुनपनि दुईदुई पटक मेरा पिताजीलाई काङ्ग्रेसी गुण्डाहरुले भौतिक आक्रमण गरेकै हुन । तर उनीहरुको आक्रमणले मेरो बुबाको राजनैतिक चेतना र आस्थाको हत्या गर्न सकेन । र, ती अहिले पनि पराजित मानशिकता लिएर लर्खराइ रहेका छन् । काला काङग्रेसीहरु (जोजोसँग सम्बन्धित छ) ! खैर, जेसुकै होस् बल, धरपकड र त्रास देखाएर राजनीति गर्नेहरु को नै टिकेको छ राजनीतिमा ? तर मेरा पिताजीबाट मैले सिकेको कुरो के हो भने लोभ, क्षोभ र धनदौलत विना पनि निरन्तरको लगावले मानिसलाई आफ्नो क्षेत्रमा एक हदसम्म सफल हुन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
Salute to your Dad - hope we learn something from his honesty :) (Huna ta ma already honest nai hoina ra?? ;))